Tayo kala duwan ee ahama Steel - Shiinaha Richina
Richina waa qof ku taqasustay cayn kasta oo Tools ahama Steel Garden, Laakiin macaamiisha badan tixgelin karaan nooca ahama waxaa loo isticmaalaa Tools Garden kuwan, Waa maxay tayada kala duwan ee birta ahama?
Ma ahama oo dhan waa mid tayo isku mid ah oo ka kooban. nickel The dheeraad ah iyo chrome ee daawaha steel saldhig, ka sii adag oo muddo dheer waa. Sidaas awgeed, waa qaali mishiinka iyo dhalaalin. flatware ahama waxaa laga sameeyey mid ka mid ah dhowr Alloys kala duwan. The Alloys inta badan la isticmaalo waa 304, 410, 420 iyo 430.
Waxa intaa dheer in steel, daawaha 304 waxaa ku jira cimri dherer 18% chrome iyo luster jilicsan of 8% nickel. Tani boorish qani ku ah chrome iyo nickel bixisaa miridhku ugu badnaan iyo ilaalinta daxalka. 18/8 ahama waxaa aadka loo arkaa oo waxaa laga helaa flatware ahama ugu fiicnaa. In Europe, an 18/10 Halabuurka loo isticmaalo, taas oo u dhiganta US caadiga ah 18/8 si.
daawaha ￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼The 430 waxaa ku jira 18% chrome iyo nickel lahayn. Bixiya hab dhaqaale, 18/0 ahama ayaa u fiiriyaan cajiib ah iyo dareenka of 18% chrome, iyo sidoo kale waarta, dhameysato polish sare. Waxay bixisaa iska caabin aad u fiican in ay miridhku iyo daxalka. 18/0 ahama kor u haya ilaa xad si wanaagsan in la isticmaalo ganacsi culus laakiin ma bixiso luster ee waarta ee 18/8.
410 daawaha ahama ku jira 13% chrome iyo nickel lahayn. 13/0 ahama bixisaa quruxda qiimo suubban, laakiin sidoo kale waa ka wada yar adkaysi u daxalka iyo abuurmeena. Waxaa haboon marka qiimaha waa tixgelinta ugu sareeya.
Tools Garden Our, oo ay ku jiraan Garden qalab Qodis weyn ama Tools Garden Small Hand, waxaa la sameeyey ee 420 daawaha,
Tani-carbon sare, 13% qalabka chrome haboon in ildheer oo daab iyo natiijooyinka qarkii a goynta af badan.